‘काँग्रेसलाई विजय गच्छदारको खाँचो छ, उपसभापतिमा दोहोरिनुहुन्छ’ | Ratopati
‘काँग्रेसलाई विजय गच्छदारको खाँचो छ, उपसभापतिमा दोहोरिनुहुन्छ’
लगानीको हिसाब गरौ, हामी काँग्रेसका आगन्तुक होइनौँ : योगेन्द्र चौधरी
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १४, २०७८ chat_bubble_outline0
काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता टुग्याउँदाको सकस, गच्छदार समूहको महाधिवेशन रणनीति र उनको तयारीबारे रातोपाटीले योगेन्द्र चौधरीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –
तपाईँले आफू काँग्रेसभित्रको कुनै गुटमा छैन भन्नुभयो । तर, शेरबहादुर देउवाप्रतिको तपाईँहरूको झुकाव लुकाएर लुक्छ र ?
त्यसोभए फोरम लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेसमा जोडिएको पङ्क्तिले महाधिवेशनमा कसलाई सहयोग गर्छ ? तपाईँहरूको रणनीति के छ ?
कुनै पनि मान्छेले राजनीति गर्दा भविष्य हेर्छ नै । हामी पनि काँग्रेसमा आउँदा राजनीतिक भविष्य हेरेर नै आएका हौँ । राजनीतिक भविष्य जता सुरक्षित देखिन्छ, त्यतातर्फ जाने कुरा मानवीय स्वभाव नै हो । शेरबहादुर देउवाजी विजयकुमार गच्छदारसँग आएका फलानो–फलानो मान्छे ठीक छन्, उनीहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने सहयोग गरौँला ।
यस्तै रामचन्द्र पौडेलजीले पनि योगेन्द्र चौधरीहरू पार्टीका लागि आवश्यक मान्छे हुन् भन्ने लाग्यो र संरक्षण दिनुभएको हामीलाई आभास भयो भने उहाँलाई हामीले पनि साथ दिन्छौँ । हरेक मान्छेले आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरिरहेको हुन्छ । जोसँग हामीलाई राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ, उसैसँग हुन्छौँ ।​
तपाईँहरू काँग्रेस प्रवेश गरेको चार वर्ष भएको छ । चार वर्षको भोगाइबाट कसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गरिदिन्छ जस्तो लाग्यो ? कोसँग सहज महसुस गरिराख्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म पार्टी सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाजीले नै हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । हामीलाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टीमा कति धेरै सकस भोग्नुभयो, पार्टीभित्रको सन्तुलन कसरी मिलाउनुभयो, त्यो उहाँलाई थाहा होला । तर, हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ । त्यो जिम्मेवारी सभापतिले नै दिएको हामीलाई आभास भएको छ ।
काँग्रेसमा विजय दाइको धेरै रगत र पसिना पनि बगेको छ । आधा जीवन काँग्रेसमै बिताउनुभयो । उहाँले असोज ६ गते म सभापतिको उम्मेदवार होइन भन्नुभएको छ । काँग्रेसका सबैले उहाँलाई उपसभापतिमा आवश्यक छ भनेर बुझ्नुभएको छ । त्यो ठाउँमा ल्याउन उहाँलाई दुवै पक्षबाट सहयोग हुने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
१४ औँ महाधिवेशनमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका नेताहरूको भूमिका कस्तो रहने छ ?
फोरम लोकतान्त्रिक काँग्रेसमा आउँदा विजय दाइले ‘काँग्रेसमा रहेको ध्रुवीकरणलाई थप ध्रुवीकृत गर्न नभई एक ठाउँमा ल्याउन पुलको काम गर्छु, दुई जना (सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल) मभन्दा सिनियर नेतालाई एक ठाउँमा उभ्याउन सकेको दिन मेरो राजनीति सफल भएको अनुभूति गर्छु र काँग्रेसमा आएको मेरो सार्थकता पुष्टि हुन्छ’ भन्नुभएको थियो ।
अहिलेसम्म उहाँको काम पनि त्यही छ । महाधिवेशनमा पनि उहाँको भूमिका यही रहन्छ । उहाँको दिशानिर्देशले हामीलाई गाइड गरेको छ । तल्लो तहमा पनि हाम्रो भूमिका यही रहेको छ ।​
यो त भूमिकाको कुरा भयो । तपाईँहरूको उपस्थिति कस्तो हुन्छ ?
असोज ७ गते विजय दाइ विराटनगर जाँदा एयरपोर्टमा कार्यकर्ताले देखाएको उत्साह र उर्जाले काँग्रेसमा उहाँप्रतिको विश्वास र कार्यकर्ताको चाहना प्रकट भएको छ । विजय दाइप्रति काँग्रेस कार्यकर्ताको क्रेज उस्तै छ । त्यसैले पनि नेपाली काँग्रेसमा विजय गच्छदारको आवश्यकता र भूमिकाको खाँचो छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । उहाँ मधेस राजनीतिमा एउटा खम्बाका रूपमा रहेको नेतृत्व हो । राज्यको मूलप्रवाहमा नआएका लाखौँ लाख थारु समुदायको उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
उहाँ जत्तिको नेतालाई भूमिका दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन । नेताहरूले उहाँलाई साझा रूपमा भूमिका दिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । काँग्रेसमा विजय दाइको धेरै रगत र पसिना पनि बगेको छ । आधा जीवन काँग्रेसमै बिताउनुभयो । उहाँले असोज ६ गते म सभापतिको उम्मेदवार होइन भन्नुभएको छ । काँग्रेसका सबैले उहाँलाई उपसभापतिमा आवश्यक छ भनेर बुझ्नुभएको छ । त्यो ठाउँमा ल्याउन उहाँलाई दुवै पक्षबाट सहयोग हुने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
१४ औँ महाधिवेशनमा तपाईँको उपस्थिति कहाँ रहन्छ ? के रणनीति बनाइराख्नुभएको छ ?
फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका हामी ११ जना केन्द्रीय सदस्य छौँ । हामी सबै पुरानै भूमिका आउने मलाई विश्वास छ ।